Ejiri Chandelier chọọ ya akwụkwọ. 70 x 70 x 110h - (DFL) - Dafne Italian Design
Chandelier mma na acha epupụta - akụkụ cm. 70 x 70 x 110h - (DFL)
Home shop ọkụ Chandeliers Chandelier mma na agba epupụta ...
Home / shop / ọkụ / Chandeliers / Chandelier etubere ugo na acha epupụta - Akụkụ cm. 70 x 70 x 110h - (DFL)
Chandelier mma na acha epupụta - akụkụ cm. 70 x 70 x 110h - (DFL) buru ibu
okporoko: 806881882618 Category: Chandeliers Product ID: 20783
Chandelier mma na epupụta - akụkụ cm. 70 x 70 x 110h - Socket ụdị E14 - Max wattage 40 - 5 Number nke Ìhè - Type bọlbụ HSGSC / G - Class m - IP 20 - Star ọkụ Usoro - Nnọọ Mkpa: Ndi ike agbanyụrịrị. Arụ ọrụ niile ga - arụ ọrụ site n'aka onye ọkachamara pụrụ iche - Ngbanwe ma ọ bụ ime ihe ike nwere ike ime ka ngwaọrụ ahụ dị ize ndụ. The ụlọ ọrụ na-anabata ibu ọrụ ọ bụla maka mmebi kpatara ya onwe ngwaahịa ruo eruo bụghị dị na ntụziaka. (DFL)
Chandelier na oriọna Black - site na elu ruo na ọkụ 6 - Ndakọrịta Classe Lamp; A, A +, A ++ - cm. 70 x 25 x 70h - (DFL)
5 chandelier - okpokoro n'elu ụlọ ọkụ na ọkụ ọkụ ọkụ - ọdịdị ifuru - na ígwè ma na-arụ ọrụ iko - nchịkọta adịghị etinye - Akụkụ: cm. 70 x 20 x 70h (STL)
klas chandelier - agba ọcha - 6 chandelier ọkụ na-enweghị bulbs cm. 75 x 75 x 110h - dakọtara na bọmbụ ọkụ nkenke; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
217€ Aggiungi al carrello
6 Ceiling Chandelier Lighter - Kwekọrọ na klas Light Lightb; A, A +, A ++ - Akụkụ: cm. 80 x 80 x 100h - (DFL)
Chandelier na violet lampshade mma na butterflies na okooko osisi - cm. 35 x 35 x 130h - (UL)
Okpokoro oriọna na kristal - Akụkụ cm. 15 x 15 x 25h - (DFL)
Chandelier nke oge a na kristal - Styledị: Urban / deco - cm. 53 x 53 x 110h - Dakọtara na Klas Bulb; A, A +, A ++ - (DFL)
Elu ụlọ oriọna mma na epupụta - Size cm. 60 x 20 x 90h - (DFL)
Ilingtọ chandelier - dakọtara na bọlbụ ọkụ klaasị; A, A +, A ++ - (DFL)
Akara chandelier nke a na-eme nke ọma - Isi: cm. 75 x 75 x 100h - (DFL)
6 chandelier na aja oriọna na-enwu enwu - Ndakọrịta Classe Lamp; A, A +, A ++ - cm. 70 x 25 x 70h - (DFL)
Chandelier - Square lampshades - (DFL)
Akara chandelier nke a na-eme nke ọma - Isi: cm. 70 x 70 x 100h - (DFL)
imewe chandelier na oriọna duga - cm. 70 x 70 x 110h - agba agba - kwekọrọ na bọlbụ ọkụ klaasị; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
chandelier kichin - agba ọcha - 9 chandelier ọkụ n'enweghị iko cm. 75 x 75 x 110h - dakọtara na bọlbụ ọkụ klaasị; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Chandelier - ọkụ na-acha ọkụ ọkụ 2 ọkụ - Ifuru udi - ígwè ma rụọ ọrụ iko - bulbs not included - Dimensions: cm. 70 x 25 x 28h (STL)
Chandelier - chandelier na-adabere na ọkụ 2 ọkụ ụlọ - ọdịdị kpochapụ - ígwè na ọrụ iko - nchịkọta adịghị gụnyere - (STL)